Sandals Corporate University: Dzidzo yepamusoro nechinangwa chepamusoro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » dzidzo » Sandals Corporate University: Dzidzo yepamusoro nechinangwa chepamusoro
Kuputsa Jamaica Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • dzidzo • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • vanhu • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nguva dzose varipo kukwazisa vashanyi nenyemwerero inodziya, vashandi pa Sandals Resorts yakazvipira kugadzirira vashanyi vayo 'Luxury Inosanganisirwa® Zororo zvakanakisa zvaingave. Asi kana zvisiri paawa, vashandi vazhinji vari kuwanawo dzidzo yakadzama nekutenda kuSandals Corporate University (SCU).
Sandals Corporate University ndiyo yekambani yedunhu redzidzo chirongwa chevakuru kune zviuru gumi zvevashandi veSandals Resorts neBeaches Resorts. Kubva payakatanga, nhengo dzechikwata dzakawanda dzakanyoreswa neCSC, nezvitupa zvakapihwa mumakosi emukati senge kushandira vatengi, hutungamiriri, hunyanzvi hwekutengesa, uye kutaurirana kwehunyanzvi.
Yekutanga yerudzi rwayo muCaribbean, iyo SCU inosimbisa vashandi parizvino vasina hunyanzvi hwekudzidza uye inopa nhengo dzechikwata dzinokwanisa nzira yekufambisira mberi dzidzo yavo. Kubudikidza nehukama nemayunivhesiti anozivikanwa epasi rese, masangano ehunyanzvi, uye masosi edzidzo emuno, iyo SCU inopa zvirongwa zvinotangira pane zvekutanga zvekugamuchira vaenzi-kuzviisa munzira yekudzidza iyo inogona pakupedzisira inotungamira kune masters uye / kana madhigirii echiremba.
Kunze kwekugamuchira kudzidziswa kunoshanda mune chaiwo maratidziro, Sandals Corporate University inotarisawo pazvinangwa zvisere zvakakosha zvekudzidza. Pakati pezvinhu izvi kuongororwa kwehunyanzvi hweSCU, kuongorora ruzivo, hunyanzvi uye hunhu hunodiwa nevashandi kuti vaite nemazvo; iyo SCU muchinjikwa yekudzidzisa chirongwa, ichibvumira nhengo dzechikwata kuti dziwane ma-department-department ruzivo; Sandals Corporate University "maawa ekuzvipira", ayo anopa nhengo dzechikwata mukana wekupinda mukupa rubatsiro nekuzvipira kuburikidza neSandals Foundation neSandals EarthGuard; uye hunyanzvi hwehunyanzvi, ichipa nhengo dzechikwata zvitupa zvehunyanzvi padanho repasi rose.
Sachigaro uye Muvambi, Gordon "Butch" Stewart, pamwe na CEO, Adam Stewart, vakaparura Sandals Corporate University musi waKurume 21, 2012 paSandals Grande Riviera Beach & Villa Golf Resort muOcho Rios, Jamaica. Kubudikidza nechirongwa chakasarudzika uye chakakosha chedzidzo, Sandals Resorts inoedza kuita zvine mutsindo pazviitiko zvevaeni vayo nekuvimbisa yakanakisa sevhisi sevhisi, maitiro, hunyanzvi, uye ruzivo kubva kunhengo yega yega yechikwata.
Dzimwe nhau nezve Sandal Resorts.